सरसफाइ हाम्रो सभ्यताः डाँगी | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / सरसफाइ हाम्रो सभ्यताः डाँगी
सरसफाइ हाम्रो सभ्यताः डाँगी
Posted by: युगबोध in संक्षिप्त समाचार March 20, 2019	0 58 Views
घोराही । पूर्ण सरसफाई बालमैत्री घर नक्सा नियमन कार्यावयन तथा व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम घोराहीमा सम्पन्न भएको छ। घोराही उपउपमहानगरपालिका वडा नं. १४ को आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै पा“च नं. प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर डा“गीले सरसफाइ मानिसको पहिलो सभ्यता भएको बताउ“दै त्यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने वताउनुभयो। सरसफाइ मानिसको पहिलो कुरा भएको बताउ“दै मानिस सबैभन्दा पहिले मानसिकरुपमा सफा हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहनुभएका प्रदेश सदस्य डा“गीले स्वस्फुर्तरुपमा सरसफाइ गरे मानिसको जीवनशैलीमै सुधार हुने उल्लेख गर्नुभयो। घोराही उपमहानगरपालिकाले सरफाई अभियान मुख्य प्राथमिकताका दिएर अगाडि बढेको बताउ“दै यो अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने वताउनुभयो। फोहोर मानसिक हटाए सबै सभ्य समाजको निर्माण हुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि राजनीति बलियो हुनपर्ने बताउनुभयो।
नगरपालिकाले बनाएका नकारात्मक नियमका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने बताउदै गतिशीलताका आधारमा समाजको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रधानाध्यापकको सहभागिता थियो। गोष्ठीमा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सन्तबहादुर सुनार, इञ्जिनिएर रामधन श्रेष्ठ, मोती विश्वकर्मा, पत्रकार गोविन्द खड्काले प्रशिक्षण दिनुभयो। वडाध्यक्ष शक्तिराम डागीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन वडा सदस्य गुलाम रसुलले गर्नुभएको थियो।
Previous: अनुदानमा बोका वितरण
Next: सामाजिक सद्भाव र रङको पर्व होली